Horudhac: Arsenal vs Manchester City… (Guardiola oo booqanaya caawyihiisii hore ee Arteta siddeed dhammaadka Carabao Cup) – Gool FM
Horudhac: Arsenal vs Manchester City… (Guardiola oo booqanaya caawyihiisii hore ee Arteta siddeed dhammaadka Carabao Cup)
(London) 22 Dis 2020. Kulan ka tirsan wareegga siddeed dhammaadka tartanka Carabao Cup (EFL) ayaa caawa lagu ciyaari doonaa garoonka Emirates Stadium oo ay Arsenal ku soo dhoweyn doonto Manchester City.
Mikel Arteta ayaa doonaya inuu iska yareeyo cadaadiska saaran kaddib bandhig liita oo ay fasal ciyaareedkan la billawdeen, waxaana uu caawa ajeynayaa inuu guul ka gaaro macallinkiisii hore ee Pep Guardiola, kaasoo tartankan sanad ciyaareedkii hore ku hoggaamiyay Man City.
Tartanka:- England – EFL Cup
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso:- 11:00 fiidnimo xilliga geeska Afrika
Garoonka:- Emirates Stadium
Garsooraha:- Paul Tierney
Arsenal ayaa weyn doonta caawa kabtankeeda Pierre-Emerick Aubameyang kaasoo dhaawac ka qaba muruqa hoose ee lugta.
Thomas Partey oo dhaawac ah iyo Granit Xhaka oo kulankiisii ugu dambeeyay ee ganaaxii saddexda kulan ahaa qaadanaya ayaa sidoo kale ka maqnaan doona Gunners, balse waxaa safka Macallin Mikel Arteta kusoo laabanaya Gabriel Magalhaes, kaasoo kulankii u dambeeyay ganaax ku seegay.
Gabriel Jesus ayaa kulankan ka maqnaan doona Manchester City isagoo ka cabanaya xanuun dhanka ilkaha ah, waxaana sidoo kale shaki dhaawacyo ah la galinayaa Aymeric Laporte iyo Eric Garcia.
Sergio Aguero, Benjamin Mendy, Phil Foden, Riyad Mahrez, Fernandinho iyo Nathan Ake ayaa dhammaantood qayb ka noqonaya qorshaha Pep Guardiola maadaama aysan ciyaarin kulankii ay toddobaadka horraantiisii Man City la qaadatay Southampton.
Markii ugu dambeysay oo ay Arsenal and Manchester City ku kulmaan tartankan waxay ahayd ciyaartii kama dambeysta ee sanadkii 2018, waxaana xilligaas 3-0 ku adkaatay Man City, sidoo kale Gunners ayaa la garaacay saddexdii jeer ee ugu dambeysay oo ay labadan koox isku arkaan tartankan, waxaana fiinaalkii 2018 ka horreeyay 2009-10 iyo 2011-12 oo wareeggan oo kale lagu garaacay.
Manchester City ayaa soo adkaatay saddexdii jeer ee ugu dambeysay oo ay booqatay Emirates kuwaasoo dhammaantood ahaa Premier League, waana kooxda kaliya ee Emirates kusoo garaacday Arsenal saddex kulan oo xiriir ah.
Kooxda kaliya ee Arsenal iyadoo marti ah afar jeer garaacday waa Chelsea oo lix guul oo xiriir ah Gunners ka gaartay iyadoo marti ah, waxaana xilligaas ay Blues dhiggeeda garaacday lix jeer oo xiriir ah intii u dhexeesay 1960 illaa 1965.
Arsenal ayaa tartankan laga reebay lix ka mid ah siddeedii jeer ugu dambeysay ee ay wareeggan siddeed dhammaadka ciyaaraan, waxaana ay semi-fiinaalka usoo gudbeen kaliya 2010-11 iyo 2017-18.
Arsenal ayaa caawa wareegga siddeed dhammaadka EFL Cup ciyaareysa markeedii 29-aad, waxayna kaga badan tahay koox walba.
Tan iyo xilli ciyaareedkii 2006-07, kaliya Chelsea oo Stamford Bridge ku gaartay 20 guul ayaa ka badan inta Arsenal ay guulo ku gaartay garoonkeeda Emirates tartankan EFL Cup-ka, waana labada koox ee guulaha ugu badan hal garoon ku gaaray tartankan 13-kii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay.
Manchester City ayaa guuleysaneysay kulan walba oo ka mid ah tartankan (xitaa fiinaalka) 17-kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay ciyaartay.
Man City ayaanan guuldarro ku qaadan magaalada London kulan ka tirsan League Cup (EFL Cup) tan iyo Diseembar 2013 xilligaas ay Super 3-1 ku dubatay Cityzens, waxaana muddadaas ay guuleysatay lix jeer, labana barbarro (Labada barbarro xitaa rigooreyaal ayay guul ku gaartay).
Raheem Sterling ayaa si toos ah uga qayb qaatay 17 gool kaddib 25 kulan oo uu tartankan ciyaaray isagoo dhaliyay 10 gool, toddobo kalena caawiyay.
Weeraryahanka reer England ayaa sidoo kale shabaqa soo taabtay labadii jeer ee ugu dambeysay oo uu booqday Emirates Stadium, waxaana labadaas kulanba ay ka tirsanaayeen horyaalka Premier League.
Horudhac: Real Valladolid vs Barcelona… (Blaugrana oo baadi goobeysa inay wadada guusha La Liga dib ugu soo laabato)
Manchester City iyo Man United oo xiriir toos ah la sameeyay xiddig ka tirsan Kooxda Bayern Munich